Iwo akanakisa mafia mafirimu: ndeapi iwo? ZVAKAITWA 2018 | Ndipei zororo
Iwo akanakisa mafia mafirimu
Gabriela moran | | Cine, Chiito Cinema, Cinema nemhando, General
ari Mafia mafirimu akonzera huwandu hwepamusoro hwekufarira mune vateereri vemarudzi ose. Mumarongero tinowana muunganidzwa unoyevedza uzere nehuswa uye chiito. Nezvo kutaurwa kunoitwa kune nyaya dzakadai sekutengesa zvinhu, kupokana pakati pemativi akasiyana uye kugona kukuru kuita zvirongwa zviri kunze kwemutemo wakasimbiswa. Misoro mikuru yekuputika pane hombe skrini! Ndicho chikonzero nei muchinyorwa chino isu tichifumura yedu sarudzo neakanakisa mafia mafirimu enguva dzese.
Iwo marongero haamiriri chero rungano. inoratidza chokwadi chakasimba chiri mumasangano mafia uye zvakavakomberedza. Nekudaro, iyo nyaya dzinotizadza neadrenaline uye nekunyengerera kuburikidza ne eccentric vatambi vanofarira umbozha, simba uye makaro. Verenga pamusoro kuti udzidze nezve nyaya dzinonyanya kukosha dzakagadzirwa nemhando yemafirimu!
Kubiridzira imhosva: zvinhu zvisiri pamutemo zvakasiyanasiyana nekufamba kwenguva uye nenzvimbo. Fodya, doro uye zvakagadzirwa zvinodhaka zvakaverengerwa mune runyorwa rwezvinhu zvinotengeswa zvakarangwa munguva dzakasiyana. Kune masangano akazvipira mukutengesa kunyangwe vanhu!
Nekuda kwekuoma kwekuita, matsotsi anoronga mukati memapoka anotongwa nemazano asingazununguki. Ndokusaka nhoroondo yemafiya akaumbwa nekufamba kwenguva. Semuenzaniso tinowana iyo Italian, Russian neJapanese mafia pakati peanonyanya kuzivikanwa. Kune rimwe divi, iyo Kondinendi yeAmerica zvakare ine yakawanda mitambo mhosva dzakarongeka, idzo dzakakurudzira mafia mafirimu.
Pakati pemazita akaunza vateereri vazhinji mumitambo yemamuvhi, tinowana zvinotevera:
1 Iye Godfather (Chikamu I, II, III)
4 Akapinda mukati
5 Vasingabatike vaEliot Ness
7 Zvimwe Zvinorumbidzwa Mafia Movies
Iye Godfather (Chikamu I, II, III)
Iyo cinematic classic ine maviri akateedzana. Iko kuchinjika kwenoverengeka naMario Puzo uye yaitungamirwa naiye anozivikanwa Francis Ford Coppola. Yekutanga firimu yetrilogy yakahwina Oscar yeakanakisa firimu regore. Yakaburitswa muna 1972 uye ine nyeredzi Marlon Brando, Al Paccino, Robert Duvall, Richard Castellano naDiane Keaton.
"The God baba" inotaurira nyaya yemhuri yeCorleone: inoumbwa nemhuri yeItaly-America iri pakati pemhuri shanu dzinonyanya kukosha dzeCosa Nostra yeNew York. Mhuri iyi inotungamirwa naDon Vito Corleone, uyo ane hukama nenyaya dzemafia.
Nhoroondo Yakarondedzera zvichidzoka muchikamu chechipiri nechechitatu chakaburitswa muna 1974 na1990 zvichiteerana. Mhuri iyi ine vanakomana vatatu nemukadzi. Kune vamwe vavo zvakakosha kuenderera nebhizinesi remhuri, zvisinei vamwe havafarire. Kazhinji tinowana Don Vito achishanda pamwe chete nemhuri kuchengetedza humambo hwake.
Mumafirimu matatu aya tinowana kubatana uye kupokana pakati pemhuri shanu dzakakosha idzo dziri chikamu chemafia eItari -America uye anotonga dunhu. Mukuwedzera kune Corleones, tinowana mhuri Tattaglia, Barzini, Cuneo uye iyo Stracci.
Pasina kupokana, iyo trilogy yausingakwanise kupotsa! Mafirimu ake matatu ari pakati pezvakakurumbira uye zvinokosheswa zvigadzirwa pasi rese. Muna2008, yakatora chinzvimbo chekutanga mumatanho ema500 Best Mafirimu eAse Nguva., Yakagadzirwa nemagazini yeUniversity.
Iyo ndeimwe yeanomiririra zvigadzirwa zveQuentin Tarantino, yakaburitswa muna 1994 uye inoonekwa seimwe yemafirimu akanakisa emakore gumi. Iyo bhaisikopo yakakamurwa kuita akati wandei zvakabatana zvitsauko. Iyo nyeredzi vane mukurumbira vatambi vakaita sa: Uma Thurman, John Travolta, Samuel L. Jackson naBruce Willis.
Zano inotaurira nyaya yaVincent naJules: varume vaviri vakarova. Ivo vanoshandira tsotsi ine ngozi inonzi Marsellus Wallace, ane mukadzi anoshamisa anonzi Mia. Marsellus anoshanda nevarwi vake vane basa rekuwanazve kabhegi kasinganzwisisike kaakabiwa kubva kwaari, pamwe nekuchengeta mukadzi wake kana ari kunze kweguta.
Mia akanaka musikana wechidiki uyo anofinhwa nehupenyu hwake hwezuva nezuva, kuti anotanga kudanana naVincent: Mumwe wevashandi vemurume wake! Hukama pakati pevaviri hunomiririra njodzi huru kana murume akaziva nezvemamiriro ezvinhu. Zvisinei nenyevero dzaJules, Vincent anoita kuti manzwiro ake kuna Mia akure uye anofambisa zvese zvaari kuda, imwe yacho inoisa hupenyu hwake panjodzi!
Pane kumwe kwekufamba kwavo vachikomberedza guta, ivo vanopinda kirabhu uko imwe yeakanyanya kuratidzwa mafirimu anoitika kuburikidza nekutamba kwekunze pasi.
NaTarantino's quirky maitiro, nyaya yacho inowonekera izere nemhirizhonga, kuponda, madhiragi uye kuseka kwevatema. Kana usati waiona, haugone kuipotsa!
Iri zita rinoenderana nekugadziriswa kwemufirimu kwakaburitswa muna 1932. Iyo vhezheni itsva yakaburitswa muna 1983 uye nyeredzi Al Paccino. "Scarface" ckana inowirirana neimwe yemafia mafirimu ayo akakonzera kupokana kukuru: Yakaverengerwa "X" muUnited States nekuda kwayo kwakanyanya zvemhirizhonga!
Tony Montana, protagonist, mugari weCuba ane ruzha rwekare anogara muUnited States. Aneta nehupenyu huzere nourombo uye zvisingakwanisike, Tony afunga kukwidziridza hupenyu hwake chero zvodii. Ndosaka iye neshamwari yake Manny vatanga kutora mabasa asiri pamutemo kune vakuru vemapoka emunharaunda. Nokukurumidza vavariro yake inokura uye anotanga rake bhizinesi rekutengesa zvinodhaka uye anovaka yakasimba kugovera uye huori network. Akave mumwe wevanonyanya kukosha vatengesi vezvinodhaka mudunhu iri!
Paanobudirira, anosarudza kukunda musikana weumwe wevavengi vake. Gina, anoridzwa naMichelle Pfeiffer, mukadzi anoyevedza anoroora Tony nguva pfupi yapfuura.
Tony anopindwa muropa necocaine uye zviri kukuomera kudzora hasha. Anotanga kuwedzera rondedzero yevavengi uye kuve nematambudziko emhuri. Mukufamba kwenyaya, zviitiko zvakawanda zvekukonana nevavengi vesangano zvinoitika.
Iwe haugone kupotsa iyi bhaisikopo, iri mukati megumi epamusoro yesarudzo yeAmerican Film Institute!
Yevakakurumbira mutungamiriri Martin Scorsese; tinowana imwe yemafirimu emafia achangoburwa akaburitswa muna 2006. Mumutambo wemapurisa unofungidzirwa, tinowana Leonardo Di Caprio naMat Damon sevamiriri. Vakasimuka vakahwina Oscar yemufananidzo wakanakisa wegore iro!
Iyo rondedzero inotarisana nehupenyu hwe vanhu vaviri vanopinda munzvimbo dzinopikisana: mupurisa akapinda mukati memafia uye mhomho yakapinda mumapurisa. Kuputika kusanganiswa kuzere nemutambo, kufungidzira uye kurangana! Eccentric mutambi Jack Nicholson anopa huwandu hwakawanda hwezviitiko izvo zvinomutsa manzwiro ako nekuita kunoshamisa paanotamba naFrank Costello. Iye muropa ane mhirizhonga ane vavengi vazhinji uye ane hukama hwepedyo kwazvo nemumwe wevaviri protagonists, uyo ari kumusora kubva kuBoston Police department.
Kune rudo katatu inotungamirwa nachiremba wepfungwa kubva kubazi remapurisa.
Isu tinowana zvisingatarisirwi kutenderera mune iyo nyaya uye yakawanda yekuita, ndosaka ichionekwa seimwe yeakanakisa mafirimu eiyo genre. Pasina kutaura zvakare kuti Scorsese inogara iri vimbiso yemuvhi ine imwechete kuurayiwa!
Vasingabatike vaEliot Ness
Yakaburitswa muna 1987, iyi mafia-yakabatana firimu inotaurira yakapesana nyaya: ndokuti, mhando yemapurisa yezvinoitika mukurwisa mhosva dzakarongeka. Ine nyeredzi Kevin Costner uye mutambi mukuru anosanganisira Robert de Niro, pamwe naSean Connery.
Iyo zano sIzvi zvinoitika muChicago munguva yemhomho yeAmerica. Iyo protagonist ndeye mapurisa ane basa rekusimbisa Kurambidza, saka anorwisa bhawa mune inotyisa Al Capone. Munzvimbo iyoyo anowana kusanzwisisika kusanzwisisika izvo zvinoita kuti afunge kuti mapurisa eguta ari kupihwa chioko muhomwe nevatengesi; kuitira kuti dSarudza kuunganidza timu kuti ikubatsire iwe kuputsa madziro ehuori.
Mahombe madhizaizi echinyakare XNUMXs cinema ane yakawanda yekuita yakamirira iwe!
Nyeredzi Denzel Washington, iyi firimu yenhoroondo iri pane yedu runyorwa rweakanakisa mafia mafirimu nekuti yakavakirwa pazviitiko zvechokwadi uye tinoona mativi ese ebudiriro nekugara kunze kwemutemo.
Iyo Frank Lucas nyaya, mumwe wevabatsiri vemunhu ane mukurumbira wekutengesa zvinodhaka anofa nechikonzero chechisikigo. Lucas aive nehunyanzvi uye akangwara, saka akadzidza mashandisiro ebhizinesi uye Akatanga kuumba yake kambani umo maakasanganisira mhuri yake yese kuti aive akazvininipisa. Lucas anosangana naEva, mukadzi akanaka waanosarudza kuroora naye uye kutanga mhuri.
Munguva pfupi ivo Vanotanga kurarama nenzira yakasarudzika inobata mutikitivha asingaori Richie Roberts, inoridzwa naRussel Crowe. Pakarepo mutikitivha anotanga kuferefeta nechinangwa chekuburitsa murume mutsva wemafia kuti amutore ari kuseri.
Mukuvandudza kweiyo firimu isu tinogona kuwana zviitiko zvechisimba uye zviito zvakakura zvehuwori izvo mafia anoshandisa kuenderera mberi nekushanda.
Tinogona kuona divi remunhu remakoronyera mune ino firimu, asi matambudziko haamire kuvanetsa. American Gangster yazova chikafu chevaya vanofarira Holywood mob mafirimu!
Zvimwe Zvinorumbidzwa Mafia Movies
Pamusoro pemazita ataurwa pamusoro, tinowana mamwe akakodzera uye akataurwa pazasi:
Pane imwe nguva kuAmerica
Zvikwata zveNew York
Kufa pakati pemaruva
Nongedzera rudo rusina chinhu
Kubvuta: Nguruve uye Madhayamondi
Izvo zvinyorwa hazviperi! Kune mazita asingaverengeki eiyo genre ayo anonyanya kutipa makuru maficha ekuita, kusagadzikana, humbozha uye mhirizhonga. Mutemo mukuru kuuraya kuti urarame!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndipei zororo » General » Iwo akanakisa mafia mafirimu